1. Zaraina roa ny akoho dia tetehina somary lehibe ny tendany sy ny taolan-tratrany iny
2. Hafanaina ny dibera dia endasina ao ny nofon’akoho rehetra
3. Atao malefaka ny afo ary saromana ny vilany dia avela hiketrika mandritra ny 15 minitra eo
4. Hafanaina eo amin’ny 180°C ny lafaoro
5. Avela hangotraka kely ny ronono dia esorina avy hatrany
6. Hamelarana “papier alu” ny lovia mahazaka lafaoro iray na lasitra efa nolalorana menaka. Apetraka eo amboniny eo ireo tongolo gasy, ny menaka, ny siramamyary asiana sira iray tsongo. Fonosana aorian’izay dia andrahoina mandritra ny fahefatr’adiny
7. Loharana ao anatin’ilay vilany ny nofon’akoho ka atokana ireo tendany sy taolan-taolana.
8. Hafanaina ny vilany. Avela ho maina tsara vao araraka ao ilay vinaingitra mialohan’ny handrarahina ny ron’akoho. Avela hiketrika kely mandritra ny 10 minitra eo dia arotsaka ao anatin’io ny paty, rehefa mahamay tsara
9. Rehefa masaka dia loharana aloha ny paty ary apetraka eo amboniny ireo akoho efa mendy ary eo ambonin’ny akoho kosa ny tongolo gasy